Inbound Kushambadzira kweDiki Bhizinesi | Martech Zone
Inbound Kushambadzira kweDiki Bhizinesi
Chitatu, Kurume 20, 2013 Chipiri, Kurume 19, 2013 Douglas Karr
Tekinoroji inoenderera ichipa mikana inoshamisa kubhizinesi diki. Sezvo komputa simba uye mapuratifomu achiramba achifambira mberi, mutengo unoramba uchidonha kubhodhi. Makore mashoma apfuura, ekutsvaga uye ehupfumi mapuratifomu maturusi aive zviuru zvemadhora pamwedzi uye aingowanikwa kumakambani aigona kutenga mari. Mangwana ndichave ndichitaura kuboka revashandi vebhizinesi diki nezve maturusi ekuvabatsira uye UpCity ndeimwe yematurusi ari pamusoro pechinyorwa changu.
UpCity inoshandiswa nePathway ™ platform yavo. Pathway ™ inoongorora kutaridzika kwepamhepo kwebhizinesi rako, uye inopa yakapusa, nhanho-nhanho maitiro ekusimudza kuoneka kwako kwepamhepo kuburikidza nekutsvaga kweinjini yekutsvaga, manejimendi manejimendi, kublogi, uye kuwedzeredza kwenzvimbo.
UpCity yakasimba SEO Software uye yedzidzo chikuva iyo inokupa iwe kuzivisa uye maonero uye nhanho-nhanho chirongwa chekukutungamira iwe kune internet kushambadzira kubudirira.
Webhusaiti Kugadziridza - Gonesa yako webhusaiti kune vatengi kutanga uye enjini dzekutsvaga kechipiri.
Yemunharaunda Optimization - Ita shuwa kuti iwe une yakachena uye chaiyo zvinyorwa pane enzvimbo saiti senge Google+ Yemunharaunda, Yelp nevamwe vazhinji.
Social Media Optimization - Gadzira huvepo pasocial media saiti senge Twitter uye LinkedIn uye dzidza mashandisiro avo ekugadzira zvinotungamira.
Dhigirii mazano - Nzwisisa zviri kutaurwa nevanhu nezve bhizinesi rako uye makwikwi ako panzvimbo dzekuongorora uye mumasocial media uye pindura saizvozvo.
Blogging - Dzidza kuti mabloggi anogona sei kukanganisa zvakanyanya pakuonekwa kwako pamhepo uye mamwe mabhureki akareruka.
Tags: Bloggingoptimization yemunolocal searchyemunharaunda yekutsvaga optimizationyemuno seomukurumbira manejimendievanhu vezvenhausocial media optimizationwebsite optimization
Kugovera Zvemagariro Engagement
Mobile APPeal - Kuongorora iyo Landscape Landscape